Martin R. – Paibato: “Nopoizinin’ny vahiny ny asa tanana” - ewa.mg
News - Martin R. – Paibato: “Nopoizinin’ny vahiny ny asa tanana”
Sokitra, paibato, paikafo,
hosodoko… Mbola tena vitsy dia vitsy ny mivelona amin’ny
fantanterahana asa tanana tahaka ireny, raha eto Madagasikara.
Antony iray mahatonga izany ny tsy fananan’ny Malagasy ilay
kolontsaina manome lanja azy io. “Matetika izahay mahare hoe: “io
ve dia vidiako amin’izany?”, hoy i Martin R. mpanao paibato, eny
Andriambato Antananarivo Atsimondrano. Nambarany fa “ny fanabeazana
mihitsy no niteraka io tranga io. Tadidiko tsara, tsy nahay kajy
aho tany amin’ny kilasy faha-5. Hoy ilay mpampianatra anay: “alefa
manao teknika ianao raha izao no mitohy” ”.
Raha ny fanazavan’ity
raim-pianakaviana ity hatrany: “toa midika avy hatrany fa ny olona
tsy afaka loatra any amin’ny fianarana no alefa manao teknika. Tsy
ilana fampiasana saina ve izany ny teknika”? Nanao randra-mitarika
io toe-tsaina io ka raha vao asa tanana, tahaka ny zava-maivana eo
anoloan’ny Malagasy, raha ny fanazavany.
Vokatr’io poizina nalentiky ny
vahiny ao an-tsain’ny Malagasy io, ilay maha zavakanto ilay vokatra
mihitsy no takona ka tsy tazan’ny Malagasy, raha ny nambarany
hatrany. “Tena sarotra ny mampitaha na mampifandanja ny
aingam-panahy sy ny vola. Saingy, ny an’ny Malagasy, raha vao asa
tanana, tsy tokony hosandaina be loatra”, hoy i Martin Paibato.
Tolo-kevitra natolony ny hisian’ny
fanabeazana ny fiarahamonina hanome lanja sy hasina ny asa tanana.
“Aza hadinoina fa avy amin’Andriamanitra ny talenta. Izy io anefa
no milina lehibe ahavitana ny asa tanana. Raha tsy omena ny hasina
sahaza azy ny talenta, mitovy amin’ny tsy manome lanja Ilay
namorona sy nanome azy izany”!
L’article Martin R. – Paibato: “Nopoizinin’ny vahiny ny asa tanana” a été récupéré chez Newsmada.
Ambatonapoaka – Arivonimamo: fiara 4×4 nivadibadika, olona telo, indray maty
Vaky tampoka teny am-pandehanana ny kodiarana ankavanan’ny fiara 4×4 iray nitondra olona dimy saika hihazo an’i Soavinandriana Itaosy, ny asabotsy maraina teo. Teo am-pidirana ny tsenan’omby ao Ambatonapoaka no nitranga ny loza. Olona roa maty tsy tra-drano raha namoy ny ainy teny amin’ny hopitaly ny iray…Fiara marika Hyundai Sorento nitondra olona dimy (vehivavy roa sy lehilahy telo) no nivadibadika teo am-pidirana ny tsenan’omby ao Ambatonapoaka kaominina Arivonimamo, distrikan’i Miarinarivo Itasy, ny asabotsy 27 jolay tamin’ny 8 ora sy 30 mn. Vokany, olona roa maty tsy tra-drano raha teny amin’ny hopitaly kosa vao namoy ny ainy ny iray. Naratra mafy kosa ireo olona roa hafa. Araka ny fampitam-baovao nampitain’ny zandary, vehivavy no nitondra ilay fiara 4×4, kanjo vaky tampoka ny kodiarana tany amin’ny ilàny ankavanana ka nivilivily avy hatrany ny fiara, tsy voafehin’ilay renim-pianakaviana nitondra azy ny fiara ary nivadibadika avy hatrany. Mafy ny fivadibadihana satria nifatratra tany an-tanimbary mihitsy ilay fiara vao tafajanona. Maty teo no ho eo ny olona roa izay nosokirina tao ambanin’ilay fiara, araka ny fanazavana voaray hatrany. Tonga teny an-toerana avy hatrany ny zandary, ka nandefa ireo naratra nihazo ny hopitalin’Arivonimamo. Namoy ny ainy nony tonga tany kosa ny mpamily (ilay renim-pianakaviana teo ambony familiana). Nambaran’ny teo anivon’ny zandarimaria fa nikasa hihazo an’i Soavinandriana Itasy ireo niharam-boina, kanjo izao tra-doza tampoka izao.Olona telo hafa koa maty tany Beranomaso…Fa olona telo hafa koa matin’ny lozam-piarakodia tao Beranomaso Ankilizato, distrikan’i Morondava (RN 35), ny asabotsy teo. Nivadibadika noho ny olana ara-teknika ity fiara ity ka izao nitarika fahafatesana olona telo. Fantatra fa nitondra mpilalao handeha hihazo an’Ankilizato ity taksiborosy ity kanjo izao niharam-boina izao koa. Nalefa notsaboina any amin’ny hopitalin’i Morondava ireo naratra ka ny telo amin’ireo no afaka nody taorian’ny fitsaboana raha mbola arahi-maso akaiky kosa ny ambiny. Potipotika tsy nisy namantarana azy intsony koa ilay taksiborosy.Jean ClaudeL’article Ambatonapoaka – Arivonimamo: fiara 4×4 nivadibadika, olona telo, indray maty a été récupéré chez Newsmada.
Voka-kanto vaovao “Ny namako”: eo am-panomanana ny rakitsary DVD i Josehasina
Vao tsy ela akory izay no nivoahan’ilay hira “ Any ianao”, izay fampiaraham-peon’i Josehasina sy i Harimanitra. Roso hatrany ny dia…Eo am-panomanana ny rakitsary DVD nampitondrainy ny lohateny hoe « Ny namako » i Josehasina avy ao amin’ny tarika Hasina, ankehitriny . Avy amin’ilay hiran’i Josehasina hoe “Tena namana”, niarahana tamin-ndry Lucien Randrianina, Mbola Talenta ary i Micka no nitsirian’ny hevitra namoronana ny lohateny. Rakitsary DVD, ahitana hira 10 eo ho eo izy ity, ka fampiaraham-peon’olon-droa na “duo” amin’ireo namana mpanakanto hafa no nanatanterahana azy.Anisan’ny ho hita ao, ohatra, ny fampiaraham-peon’i Josehasina sy i Tonton Pà, amin’ilay hira “ Ry neny” sy ny “Anilanao”, izay iarahany amin’i Tahiana. Ao koa ny hira ara-pilazantsara “Tsy mendrika” iarahan’i Jose sy Fy, ny “Tsara ny Tompo”, iarahany amin’i Rija Hary Njaka sy Rojo Ny Avo. Ao koa ny fampiaraham-peon’i Josehasina sy i Parson Jacques ary i Josehasina sy i Feno. “Mariky ny fivelarana amin’ny mpanakanto hafa sy ny fifankatiavana eo amin’ny tontolon’ny mozika no antony lehibe hamoahako ny “ Ny namako”, ary indrindra ny fanambarana ireny fampiaraham-peo efa nisy ireny”, hoy i Josehasina, nanazava ny antony nanaovana ny rakitsary.Feno 20 taona ny tarika HasinaAnisan’ny mpanakanto nanamarika ny fahazazan’ny tanora amin’izao ny tarika Hasina, na any anaty lanonana, na fahoriana, na eny ambony tamboho, sns, tsy maintsy ao am-bavan’ny olona hatrany ny hira “Fonjan’i neny” sy ny “Kamboty velon-dray” sns… Feno 20 taona katroka, ankehitriny no nijoroan’ny tarika sy nizarany ny kanto, saingy foana ny hetsika fankalazana, tsy nisy ny fanamarihana izany noho ny antony iaraha-mahalala mianjady amin’ny firenena vokatry ny coronavirus. Mampanantena kosa anefa izy ireo fa tsy maintsy hisy ny fanamarihana amin’ny herintaona raha sitrapon’Andriamanitra.“Mila mikendry ny tononkira mitondra fitaizana sy fananarana mahakasika ny fiainan’ny olona amin’ny ankapobeny, mifanaraka amin’ny feonkira. Tadidio fa olon’ny fo ny Malagasy ka mila zavatra kanto mandona ny fon’ny olona. Aza maka tahaka be fahatany ny ataon’ny hafa fa manana ny maha izy anao, farany, aza maika hamoaka hira be dia be fotsiny fa diniho tsara aloha, mba ho hira mipetraka sy hotetezin’ny vanimpotoana ary tsy ho lefy laza” hoy ny hafatra avy amin’i Josehasina, ho an’ny tanora vao misandratra eo amin’ny tontolon’ny mozika.NarilalaL’article Voka-kanto vaovao “Ny namako”: eo am-panomanana ny rakitsary DVD i Josehasina a été récupéré chez Newsmada.
Kanto sy fialamboly: hisokatra ny Sapitô metisy an-kantsa
Hitombo iray indray ny sehatra ahafahan’ny ankizy sy ny tanora ary koa ny lehibe miala voly sy mankafy zavakanto samihafa. Hanomboka ny asabotsy 14 septambra izao ny hetsika samihafa, eny amin’ny Sapitô metisy an-kantsa eny Imaintsoanala Ambohimangakely. Miavaka amin’ireo toerana ho an’ny zavakanto sy ny kolontsaina ary ny fialamboly hafa ity toerana ity satria ao no ahitana ilay tranoheva lehibe sady tokana eto amintsika, natokana hanaovana « cirque ». Volana vitsy lasa izay ny nahatongavany eto, vokatry ny fifanomezan-tanana sy ny fanampiana samihafa. Ny fikambanana Kantsa, ahitana mpisehatra eo amin’ny tontolon’ny zavakanto sy ny kolontsaina samihafa, no tompon-kevitra amin’ity tetikasa goavana ity.Araka izany, anisan’ny ho hita eny amin’ny Sapitô metisy an-kantsa ny « cirque ». Maro koa anefa ireo karazam-pialamboly eny, toy ny « accrobranche » sy ny « tyrolienne ». Toerana ho an’ny zavakanto ihany koa ny eny, hany ka tsy ho diso anjara ny fampisehoana samihafa. Ankoatra ireo, mampisongadina ny Sapitô metsy an-kantsa ny toerana misy azy, anaty tontolo voajanahary sy madio. Ho fanomezan-danja ny fanajana ny tontolo iainana izany.Amin’io andro fanokafana ny hetsika samihafa io, hisy ny fiara hitatitra manokana, mandroso sy miverina, hiainga ao amin’ny Is’art galerie etsy Ampasanimalo, ho fanamorana ny fahatongavana eny an-toerana.Landy R. L’article Kanto sy fialamboly: hisokatra ny Sapitô metisy an-kantsa a été récupéré chez Newsmada.
Covid-19: FAMATSIANA FITAOVANA SY FANAFODY
Araka ireo hitantsika amin’ny sary eo ambany ireo dia Faritra sy Distrika maro eto anivon’ny Nosy no novatsian’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka fitaovana sy fanafody, hitsaboana marary ary ho ampiasain’ireo mpiasan’ny fahasalamana izay manao ny ainy tsy ho zavatra amin’ny fikarakarana ireo olona izay manana olana ara-pahasalamana ireo. Mikaon-doha andro aman’alina ireo mpitantana sy teknisianina eto anivon’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka sy any amin’ny faritra mikaroka izay fomba handrindrana ny famatsiana sy fitsinjarana ireny fitaovana sy fanafody ireny. Izany dia miankina amin’ny filàna vokatry ny zava-misy ao anatin’ny faritra iray. Tanjontsika miaraka ny handresy ity valanaretina ity, manentana hatrany antsika vahoaka ary, hanaraka an-tsakany sy an-davany ireo toromarika sy fepetra noraisin’ny Fitondram-panjakana hisorohana ny fiparitahan’ny valanaretina. Malagasy mifanohana, mandresy ny coronavirus #Arovy_ny_tenanao #Arovy_koa_ny_hafa #Zarazarao Sary AT/SG L’article Covid-19: FAMATSIANA FITAOVANA SY FANAFODY a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Filohan’ny Tim: « Hiasa ho an’ny vahoaka… »
Nanefa ny adidiny teny amin’ny lycée Faravohitra ny filoha teo aloha, Ravalomanana, omaly. Nambarany fa zon’ny olom-pirenena ny mifidy. « Andraikitra lehibe koa anefa izany ho fandraisana fanapahan-kevitra amin’ny fiainam-pirenena. Tompon’ny fahefana ny vahoaka koa manainga ny rehetra ho tonga mavitrika hanatanteraka izany. Enga anie ka hiverina ny hasin’ny Antenimierampirenena. Ireo depiote ho lany eo, mba hiasa araka ny tokony ho izy ho an’ny vahoaka soloiny tena fa tsy ho an’ny tombontsoan’ny tenany manokana na ho an’ny tombontsoan’olom-bitsy », hoy izy.Synèse R. L’article Filohan’ny Tim: « Hiasa ho an’ny vahoaka… » a été récupéré chez Newsmada.
Fanahiana valanaretina: mitobaka ny fako noho ny fahatapahan-dalana
Mitoby ny fako eny amin’ny boriborintany fahenina. Antony nambaran’ny avy ao amin’ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo ny fahatapahan’ny lalana ka tsy hahafahan’ny kamiao mpaka fako miditra.Anisan’ny tena lasibatra amin’ny fitobian’ny fako ny eny Ambatolampy Antehiroka. Efa amam-bolana no tsy nisy kamiao naka fako teny an-toerana. Miparitaka mibahan-dalana ary mamofona ratsy eran’ny tanàna ny fakobe. Ampahan-dalana kely sisa no azon’ny fiara alefa.Mihafihafy ny mpandeha an-tongotra. Tsy vitan’izany fa lasa manangon-drano amin’ny arabe izany fako izany satria manototra ny lakandrano tokony handehanan’ny rano maloto.Hamahana ny olan’ny fifamoivoizana ao amin’ny boriborintany VI, eo Ambodivonkely. Nandray an-tanana ny fanamboarana ny ampahan-dalana eo an-toerana ny kaominina Antananarivo Renivohitra, ao anatin’ny tetikasa lalankely. Ezahana hatao rarivato izany, araka ny fanazavan’ny lefitry ny delegen’ny Boriborintany faha-6, Randrianantoandro Sitraka. Misy ny fitaovana vaovao ampiasaina vao novidian’ny boriborintany anaovana izao lalana izao, ny ekipa teknika avy amin’ny boriborintany fahenina no manatanteraka ny asa. Mamaha amin’ny ampahany ny fitohanan’ny fifamoivozana eny Ambohimanarina sy ny manodidina ny fahavitan’ity ampahan-dalana ity, izay ahafahan’ny fiara manao hintsin-dalana, hoy ny fanazavana nomen’ny solontenan’ny mponina Ambodivonkely Ambohimanarina.Tatiana AL’article Fanahiana valanaretina: mitobaka ny fako noho ny fahatapahan-dalana a été récupéré chez Newsmada.
Ady amin’ny Covid-19: fitaovana 237.463 dolara avy amin’o Korea
Mitohy ady amin’ny valanaretina covid-19 na dia efa nambara tamin’ny fomba ofisialy aza fa efa tsy ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana intsony i Madagasikara. Mitohy ihany koa ny fanampiana ataon’ireo firenen-kafa hamongorana tanteraka ity aretina ity.Omaly, nanolotra fitaovana mitentina 237.463 dolara ho an’ny fanjakana malagasy ny firenena koreanina. Natolotra ny minisitry ny Mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy, Michelle Bavy Angelica tetsy Ambohijatovo izany. Ahitana karazan’akanjo ho an’ny ankizy sy olon-dehibe ao anatin’izany fanampiana izany.Hisitraka izao tolotra izao ny olona tena sahirana vokatry ny krizy nateraky ny valanaretina covid-19. Betsaka ireo ankohonana lasa farahidiny nahavita nivaro-pananana mihintsy noho ny fahantrana ka izy ireo no hisitraka izany akanjo izany.Iandraiketan’ny minisiteran’ny Mponina manontolo ny fizarana izany manerana ny Nosy sy ny fifantenana ireo olona tena sahirana hotsimbinina manokana amin’izany.Tatiana AL’article Ady amin’ny Covid-19: fitaovana 237.463 dolara avy amin’o Korea a été récupéré chez Newsmada.
Filaharana Fifa: mijanona eo amin’ny faha-92 hatrany ny Barea
Namoaka ny filaharan’ireo firenena mikambana ao aminy, omaly alakamisy, ny federasiona iraisam-pirenena ny baolina kitra (Fifa). Tsy mihetsika aloha, hatreto, ny Barea de Madagascar fa mbola mijanona hatrany eo amin’ny faha-92 maneran-tany. Miakatra toerana iray kosa anefa ny Malagasy raha eo amin’ny laharana eo anivon’ny kaonfederasiona afrikanina satria lasa faha-20 raha faha-21, iray volana lasa izay. Mbola mitarika hatrany kosa ry zareo Senegaley, faha-21 maneran-tany, arahin’i Tonizia sy i Alzeria ary ry zareo Nizerianina. Eo alohan’ny Barea hatrany kosa ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, faha-12 aty Afrika.Mbola ry zareo Belzika hatrany aloha ny mitarika maneran-tany, manana isa 1 773 arahin’i Frantsa, eo amin’ny laharana faharoa, nahazo isa 1 744 ary fahatelo ny Brezilianina, manana isa 1 712. Fahefatra i Angletera ary fahadimy ry zareo Portiogey. Any amin’ny faha-14 kosa ry zareo Alemà, miaraka amin’ny isa 1 602.Mbola mitana ny laharana farany kosa ry zareo St Marin. Mialoha azy, eo amin’ny faha-209 i Anguilla ary faha-208 Iles Vierges Britaniques. TompondakaL’article Filaharana Fifa: mijanona eo amin’ny faha-92 hatrany ny Barea a été récupéré chez Newsmada.